र्याम्पमा यसरी अल्झियो श्रृङखलाको न्युड पिंक गाउन
गफगाफ - मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको ६८ औं संस्करणमा नेपालको तर्फबाट मिस नेपाल २०१८ श्रृङखला खतिवडाले सहभागिता जनाएकी छिन् । यो वर्ष मिस वल्र्ड २०१८ चिनमा आयोजना भईरहेको छ । यस वर्ष श्रृङखलाबाट नेपालले पहिलेको तुलनामा बढी आशा गरेको छ । मिस वल्र्डको फिनाले हुनुअघि केही फास्ट ट्रयाक ईभेन्टहरु हुन्छन् । यी ईभेन्टहरुमा जित्नेहहरुले सिधै क्वर्टरफाईनल अर्थात उत्कृष्ट ३० सम्म पुग्ने अवसर पाउँछन् । अहिलेसम्म टप मोडल कम्पिटिशन र बेस्ट डिजाईनर कम्पिटिशन भईसकेका छन् । सर्वोत्कृष्ट मोडलको उपाधी फ्रान्सकी सुन्दरी माईभा कोउकेले जितेकी छिन् । यो उपाधी जितेसँगै उनी उत्कृष्ट ३० मा पुग्ने पहिलो प्रतिस्पर्धी बनेकी छिन् ।
यो प्रतियोगितामा नेपालकी श्रृङखला १ सय २१ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये टप ३० सम्म पुगिन् । मिस वल्र्डको फिनाले हुनुभन्दा अगाडि हुने प्रतिस्पर्धामध्ये मल्टिमिडिया, एड टु हेड च्यालेन्ज, र ब्युटी विथ प्रपोज जारी रहेका छन् । मल्टिमिडियामा श्रृङखला भारी अग्रता हासिल गरेकी छिन् । यदि उनले यसमा सर्वाधिक भोट प्राप्त गरिन भने उनी सिधै क्वर्टरफाईनल अर्थात उत्कृष्ट ३० मा पुग्नेछिन् । चीनको सान्यामा आगामी ८ डिसेम्बरमा मिस वर्ल्डको फाइनल इभेन्ट हुनेछ । मिस वर्ल्डमा पाँच शीर्षकमा अवार्ड वितरण गरिन्छ, जसमध्ये मल्टिमिडिया एउटा हो ।
टप मोडलको उत्कृष्ट ३० मा पुगेसँगै श्रृङखलाले र्याम्प मोडलिङ आफ्नो कमजोरी भएको र यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ३० मा पुग्दा पनि आफू सन्तुष्ट भएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा केही तस्बिरहरु सेयर गर्दै यस अघि भएको बेस्ट डिजाईनरमा भने सुखद अनुभव नभएको उल्लेख गरेकी छिन् । बेस्ट डिजाईनरमा श्रृङखलाको लागि मनिष राईले न्युड पिंक कलरको गाउन तयार पारेका थिए । तिघ्रामा चिरिएको यो गाउनको पछाडिको भाग सलले सिंगारिएको थियो । जुन हामी श्रृङखलाले सेयर गरका तस्बिरमा पनि देख्न सक्छौँ ।
तर यो ड्रेस लगाएर श्रृङखला राम्रोसँग हिड्न सकिनन् । यो गाउन लगाएर धेरै पटक अभ्यास गरेको भएपनि पछि गाउनमा थपिएको लम्बाई र त्यसमा थप भरिएका गहु्रंगा बुट्टाले उनलाई अफ्ठ्यारो भईदियो । किनभने गाउनमा जडित मोती र अन्य सजावटहरु एकअर्कामा अल्झिएपछि उनलाई हिड्न गाह्रो भएको थियो । श्रृङखलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, अभ्यास गर्दा म बिस्तारै आरामले हिँडेकी थिएँ । तरर्, याम्पमा हाम्रो कोरियोग्राफी फास्ट थियो । पछाडिको सल अल्झिएर मलाई हिँड्न असहज भयो ।’ यो सँगै श्रृङखलाले डिजाइनर आफैंमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा भएकाले यसमा पछि पर्दैमा समग्र प्रतियोगितामा असर नपर्र्नेे स्पष्ट पारेकी छन् ।
श्रृंखलालाई भोट गर्नका लागि निम्न विधि अपनाउन सकिन्छ :
१. मोब्स्टार MobStar नामक एप डाउनलोड गर्ने
२. कुनै पनि समाजिक सन्जाल एकाउन्टबाट लग इन गर्ने
३. अंग्रेजीमा Shrinkhala Khatiwada सर्च गर्ने
४.निलाे थाेप्लाे भएकाे प्राेफाइल Shrinkhala लार्इ फलाे गर्ने (अाइअाेएसमा पहेलाे थाेप्लाे)
५. प्राेफाइल भित्र गइ फाेटाे, भिडियाेलार्इ देब्रेदेखि दाहिने तिर स्वाइप गर्ने (अाै‌लाले सार्ने)
६. कमेन्ट गर्ने । कमेन्ट पनि भोटमा गणना हुन्छ
७. जतिसक्दो सेयर गर्ने